Booliska Magaalada Saint Cloud Ee Dalka Marayanka Oo Wiil Somaliya Toogasho Ku Dilay Iyo Sababta Dilka Keentay | Berberatoday.com
Booliska Magaalada Saint Cloud Ee Dalka Marayanka Oo Wiil Somaliya Toogasho Ku Dilay Iyo Sababta Dilka Keentay
Saint Cloud(Berberatoday.com)-Nin Mindi ama Toorray ku weeraray Dad wax ka iibsanayay Suuq wayn oo ku yaalla magaalada Saint Cloud oo ka tirsan gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka, ayaa la sheegay in uu ahaa 22-jir Soomaali ah oo lagu magacaabo Daahir Aadan, isla markaana ahaa Arday xilligii waxbarashada ku jira.
Aabbaha dhalay Wiilkaas oo la yidhaahdo Axmed Aadan, ayaa Wargeyska Star Tribune oo ka soo baxa magaalada Minneapolis u sheegay in Daahir oo ahaa Wiilkiisa uu ku dhashay Kenya, balse 15-kii sano ee la soo dhaafay uu ku noolaa Maraykanka. Waxaana falkaas si weyn u cambaareeyey Jaaliyadaha Soomaalida ah ee Maraykanka ku dhaqan oo wax laga xumaado ku tilmaamay in Wiil Soomaali ahi ku kaco weerar noocaas oo kale ah.
Wuxuu Axmed sheegay in waligii aanu Wiilkiisa ku tuhmin in uu ku lug lahaa falal xag-jirnimo. Hase-yeeshee, waxa uu intaa ku daray in Booliisku ay ku wargeliyeen in Wiilkiisa la toogtay, ka dib markii uu Mindi dad Shacab ah ku weeraray, isla markaana uu Toorriyeeyay Sagaal Qof oo uu dhaawacyo kala duwan gaadhsiiyey.
Ma jirto wax caddaynaya sababtii ku qaadday in Wiilkan Soomaaliga ahi uu dadka ku Toorriyeeyo magaalada St. Cloud oo 100 km u jirta magaalada Minneapolis ee xarunta gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, kaasoo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ee waddanka Maraykanka ku dhaqani deggan yihiin.
Inkasta oo ay Hay’adaha Ammaanku ku jiraan baadhitaanka Shaqsigaas iyo waxa ku kallifay weerarkaas, haddana weli soomay saarin wax natiijo ah oo caddaynaysa arrintaas, mana jiro War Masuuliyiinta magaalada iyo gobolku ka soo saareen xaqiijinta Aqoonsiga Ninkaas, marka laga yimaaddo war-gelinta Boolisku siiyey Aabbaha Wiilkaas Daahir dhalay.
Hase-yeeshee, Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ee Daacish ama ISIS, ayaa sheegatay Masuuliyadda weerarkaas Mindida lagu fuliyey ee ka dhacay Maraykanka. Waxaanu Warka Daacish shaacisay intaas ku daray in Ninka weerarkaas Mindida ah ee Sagaalka qof lagu dhaawacay Ninka fuliyey uu ka tirsanaa Askarta Daacish sida ay hadalka u dhigeen.
Halkan Hoose Ka akhriso warbixintan Oo English ah
The Latest on the stabbing of nine people at a central Minnesota shopping mall (all times local):